Nations League ပြိုင်ပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဆက်တိုက်ရယူနေတဲ့ ပေါ်တူဂီ
THU 11 OCT 2018UEFA NATIONS LEAGUE - GROUP A3
Poland23 Portugal
Piatek (18' minutes), Blaszczykowski (77' minutes) FT André Silva (31' minutes), Glik (42' minutes og), Bernardo Silva (52' minutes)
12 Oct 2018 . 10:25 AM
ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ Nations League ပြိုင်ပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဆက်တိုက်ရယူနေပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မပါတဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ အခုလိုရလဒ်ကောင်းတွေရယူနေတာကတော့ စိတ်ကျေနပ်စရာပါ။
ပိုလန် ၂ – ၃ ပေါ်တူဂီ
နှစ်သင်းလုံးဟာ လူစုံတက်စုံနဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး ပိုလန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကိုတော့ လီဝန်ဒေါစကီး Lewandowski နဲ့ Piątek တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့သလို ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကိုတော့ အန်ဒရီ ဆေးဗားလ် André Silva နဲ့ ဘာနာဒိုဆေးဗားလ် Bernardo Silva တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲဟာ အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့သလို ပွဲအစထဲက မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန်(၁၈)မိနစ်မှာတော့ ပိုလန်အသင်းက ဦးဆောင်ဂိုးစရခဲ့ပြီး ထောင့်ကန်ဘောကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးကို အခုနောက်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ တိုက်စစ်မှုး Piątek ကခေါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့တာပါ။ ပွဲချိန်(၃၁)မိနစ်မှာတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းကချေပဂိုးပြန်ရရှိခဲ့ပြီး ညာတောင်ပံကနေ ချိုးပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို အန်ဒရီ ဆေးဗားလ်က အလိုက်သင့်ပိတ်သွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချေပဂိုးရပြီး သိပ်မကြာခင် ပွဲချိန်(၄၂)မိနစ်မှာတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးကိုတော့ ပိုလန်နောက်ခံလူ Glik က ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်ကို လိုက်လံဟန့်တားရင်း ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲချိန်(၅၂)မိနစ်မှာတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းက တတိယဂိုးရရှိခဲ့ပြီး ဘာနာဒိုဆေးဗားလ်က ကောင်းမွန်တဲ့ အဝေးကန်ချက်နဲ့ သွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာတော့ နှစ်သင်းလုံးဟာအခွင့်အရေးကိုယ်စီရခဲ့ကြပေမယ့် သွင်းဂိုးတွေနဲ့တော့ ဝေးကွာနေခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် (၇၇)မိနစ်မှာတော့ ပိုလန် အသင်းကချေပဂိုးတစ်ဂိုးပြန်ရခဲ့ပြီး Błaszczykowski က လှလှပပအဝေးကနေ ကန်သွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ပေါ်တူဂီဟာ Nations League ပြိုင်ပွဲမှာ (၂)ပွဲကစားထားပြီး (၂)ပွဲလုံးကို အနိုင်ယူထားသလို ရမှတ်(၆)မှတ်ရရှိထားပြီး အခြေအနေကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
Russia0–0Sweden
Montenegro0–2Serbia
Faroe Islands0–3Azerbaijan
Kosovo3– 1 Malta
Photo: CryptoCashEasy.com EN , Reuters UK , ESPN.com
Nations League ပွိုငျပှဲမှာ ရလဒျကောငျးတှေ ဆကျတိုကျရယူနတေဲ့ ပျေါတူဂီ
ပျေါတူဂီအသငျးဟာ Nations League ပွိုငျပှဲမှာ ရလဒျကောငျးတှေ ဆကျတိုကျရယူနပေါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မပါတဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ အခုလိုရလဒျကောငျးတှရေယူနတောကတော့ စိတျကနြေပျစရာပါ။
ပိုလနျ ၂ – ၃ ပျေါတူဂီ
နှဈသငျးလုံးဟာ လူစုံတကျစုံနဲ့ ပှဲထှကျလာခဲ့ပွီး ပိုလနျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကိုတော့ လီဝနျဒေါစကီး Lewandowski နဲ့ Piątek တို့ကဦးဆောငျလာခဲ့သလို ပျေါတူဂီအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကိုတော့ အနျဒရီ ဆေးဗားလျ André Silva နဲ့ ဘာနာဒိုဆေးဗားလျ Bernardo Silva တို့ကဦးဆောငျလာခဲ့ကွပါတယျ။ပှဲဟာ အပွနျအလှနျသှငျးဂိုးတှနေဲ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးခဲ့သလို ပှဲအစထဲက မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျရှိခဲ့ပါတယျ။ ပှဲခြိနျ(၁၈)မိနဈမှာတော့ ပိုလနျအသငျးက ဦးဆောငျဂိုးစရခဲ့ပွီး ထောငျ့ကနျဘောကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ အခှငျ့အရေးကို အခုနောကျပိုငျးမှာခွစှေမျးပွနတေဲ့ တိုကျစဈမှုး Piątek ကခေါငျးတိုကျသှငျးယူခဲ့တာပါ။ ပှဲခြိနျ(၃၁)မိနဈမှာတော့ ပျေါတူဂီအသငျးကခပြေဂိုးပွနျရရှိခဲ့ပွီး ညာတောငျပံကနေ ခြိုးပေးလိုကျတဲ့ဘောလုံးကို အနျဒရီ ဆေးဗားလျက အလိုကျသငျ့ပိတျသှငျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ခပြေဂိုးရပွီး သိပျမကွာခငျ ပှဲခြိနျ(၄၂)မိနဈမှာတော့ ပျေါတူဂီအသငျးဦးဆောငျဂိုးရခဲ့ပါတယျ။ ဒီဂိုးကိုတော့ ပိုလနျနောကျခံလူ Glik က ပျေါတူဂီတိုကျစဈကို လိုကျလံဟနျ့တားရငျး ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးမိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပှဲခြိနျ(၅၂)မိနဈမှာတော့ ပျေါတူဂီအသငျးက တတိယဂိုးရရှိခဲ့ပွီး ဘာနာဒိုဆေးဗားလျက ကောငျးမှနျတဲ့ အဝေးကနျခကျြနဲ့ သှငျးယူပေးခဲ့တာပါ။ နောကျပိုငျးမိနဈတှမှောတော့ နှဈသငျးလုံးဟာအခှငျ့အရေးကိုယျစီရခဲ့ကွပမေယျ့ သှငျးဂိုးတှနေဲ့တော့ ဝေးကှာနခေဲ့ပါတယျ။ ပှဲခြိနျ (၇၇)မိနဈမှာတော့ ပိုလနျ အသငျးကခပြေဂိုးတဈဂိုးပွနျရခဲ့ပွီး Błaszczykowski က လှလှပပအဝေးကနေ ကနျသှငျးယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ပျေါတူဂီဟာ Nations League ပွိုငျပှဲမှာ (၂)ပှဲကစားထားပွီး (၂)ပှဲလုံးကို အနိုငျယူထားသလို ရမှတျ(၆)မှတျရရှိထားပွီး အခွအေနကေောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
by Naing Linn . 48 mins ago